जीवनशैली – Yess Khabar
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०१:२४३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०१:२४३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०१:२४ by Yess KhabarNo Comments
भिन्डीले निको पार्दछ यस्ता रोगहरु
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०२:४३१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०२:४३१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०२:४३ by Yess KhabarNo Comments
दाँतको दुखाई बाट बच्ने घरेलु उपाय
नियमित ब्रस नगर्दा दाँतको बीचमा आफूले खाएका अन्नका कणहरु बस्दछन्, जब यी कणहरु सड्न थाल्छन्, तब दाँतमा किरा लाग्न थाल्छ । किरा लागेपछि दुखाई त महशुस हुन्छ नै दाँतको जरा पनि कमजोर बन्दै जान्छ । अन्ततोगत्वा हामी हाम्रो दाँत नै गुमाउने अवस्थामा पुग्छौँ । दाँतको दुखाई एकदमै पीडादायक हुन्छ । यदि तपाईंको दाँतमा पनि किरा लागेको छ वा अत्याधिक दुखाई महशुस हुन्छ भने यी घरेलु उपायहरु अपनाएर त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ । यी उपायहरु निम्नलिखित छन् ः ￼१। पिसेको धुलो बेसार र नुनलाई तोरीको तेलमा मिलाउनुस् । मञ्जनजस्तै हिलो बनेको यो मिश्रणले दैनिक दुई९तीन पटक दाँतको मालिस गर्दा वा यसले ब्रस गर्दा दाँतको किरा मर्दछ । २। किराले खाएर खोक्रो बनेको भागमा रुवो ९कपास०लाई ल्वाङको तेलमा भिजाएर राख्नुस् । यसो गर्दा दाँतमा लागेको किरा मर्दछ । ३। तातो पानीमा फिटकिरी घोलेर बिहान९बेलुकै मुख कुल्ला गर्दा द
२७ माघ २०७५, आईतवार २३:५४२७ माघ २०७५, आईतवार २३:५४२७ माघ २०७५, आईतवार २३:५४ by Yess KhabarNo Comments
हाम्रो शरीरमा कम्तिका पनि दिनमा ४ देखी ६ लिटर पानी हाम्रो लागि अति आवश्यक छ । तर के तपाइलाई यो थाहा छ कि दैनिक बिहान खालि पेटमा पानी पिउनाले जो हाम्रो मुखमा एक किसिमको राल हुन्छ त्यो हाम्रो पेटमा पुगेर कयौं रोगहरुबाट बचाउँछ । राल मुखमा बन्ने यस्तो पदार्थ हो जसले एन्टीसेप्टीकको जस्तो काम गर्दछ र हामीले थाहै नपाइ कयौं रोगबाट बचाइ रहेको हुन्छ । पानी पिउनाले शरीरका कयौ रोग निको हुन्छ, पानीले छालाकोको रोग लाइ पनि हतपत लाग्न दिदैन भने विभिन्न किसिमका रोगहरु लाग्न दिनबाट बचाउन पनि पानीले धेरै ठूलो सहायता गर्दछ । यदि पानीलाई बिहानै खालि पेटमा पिउने गरियो भने यसको फाइदा सुनेर तपाइ पनि अचम्ममा पर्न सक्नु हुनेछ । आउनुहोस जानौं पानीलाई कुन समयमा कति मात्रामा पिउनेरु किनकी पानी पिउने सही तरीकाले मात्र तपाईलाई स्वस्थ राख्न सक्दछ । बिहान खालि पेटमा पानी पिउनुको फाइदाः बिहानै उठ्ने बितिकै ख
२३ माघ २०७५, बुधबार ०४:४६२३ माघ २०७५, बुधबार ०४:४६२३ माघ २०७५, बुधबार ०४:४६ by Yess KhabarNo Comments
केटीहरुलाई हाँसो–ठट्टा गर्ने केटा मनपर्छ भनेर तपाईंले सुन्नुभएकै होला । तर धेरैलाई यसको कारणबारे भने थाहा नहुन सक्छ ? आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔं । १. ‘बोर फिल’ हुन दिँदैनन्ः रमाइलो गर्ने व्यक्तिसँग जो पनि बस्न रुचाउँछ किनभने यस्ता व्यक्ति वरिपरि हुँदा कहिले पनि बोर महसुस हुँदैन । यसका साथै उनीहरुको जोकले माहौल हल्का हुन्छ जसका कारण खुसी प्राप्त हुन्छ । यही कारण केटीहरु यस्ता केटासँग नै डेटिङ जान चाहन्छन् । २. ‘अब्जर्भेसन स्किल’ राम्रो हुन्छः हाँसो–ठट्टा गर्ने मानिसहरुको अब्जर्भेसन (अवलोकन) गर्ने क्षमता निकै राम्रो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो वरिपरिका मानिसहरु र वस्तुहरुमाथि निकै ध्यान दिन्छन् र उनीहरुबारे बुझ्छन् पनि । त्यसैकारण उनीहरु सधैं कुनै न कुनै कुराको मजाक बनाइराख्छन् । तपाईंले एकपटक त्यस्ता व्यक्तिलाई घर लैजानुहोस् त अनि हेर्नुहोस्, महिनौंसम्म उनीहरुले कसरी स–साना कुरामा
७ माघ २०७५, सोमबार ०४:१३७ माघ २०७५, सोमबार ०४:१३७ माघ २०७५, सोमबार ०४:१३ by Yess KhabarNo Comments
जान्नुहोस नयाँ घरमा खुसी ल्याउने १९ सुत्रहरु
भर्खरै बिहे भएको परिवारमा खुसी ल्याउने जिम्मा नयाँ बुहारीको भागमा पर्छ । नयाँ दुलहीले सबै किसिमका आशा पूरा गर्न सक्छु कि सक्तिनँ भनेर अनेकौँ प्रश्न दिमागमा घुमाइरहेका हुन्छन् र घुम्छन् पनि । नयाँ दुलही कसरी नयाँ घरमा घुलमिल हुने ? यसका केही अचुक उपाय यस्ता छन्ः १. बालबालिकालाई पट्याउनुस् घरमा कसैको मन चोर्नु छ भने सुरुमा बालबालिकाको मनमा ठाउँ बनाउनुहोस् । उनीहरुसँग मित्रता गाँस्नुस् । उनीहरुलाई मनपर्ने विविध चक्लेट र सामग्री दिएर खुसी बनाउनुस् । उनीहरुलाई धेरै माया गर्नुस् । बालबालिका खुसी भए भने बाँकी सदस्य पनि खुसी हुन्छन् । २. पाकाहरुका लागि बालिका बन्नुस् घरका पाका मानिसहरुसँग केहीबेर सँगै उठबस गर्नुस्, उनीहरुसँग कुराकानी गर्नुस् । उनीहरुका अगाडि सबैथोक जान्ने छु भनेर नदेखाउनुस्, कहिलेकाहीँ बालबालिकाजस्तो बन्नुस् र आफ्ना बालसुलभ गल्तीका बारेमा उनीहरुलाई सुनाउनुस् । आफ्ना बालापनका
२५ पुष २०७५, बुधबार ०४:०७२५ पुष २०७५, बुधबार ०४:०७२५ पुष २०७५, बुधबार ०४:०७ by Yess KhabarNo Comments
त्यसपछि मैले सिकेँ –’सम्पत्ति होइन, मान्छे कमाउनुपर्छ’ : प्रियंका कार्की
‘धकधक करने लगा…’ ले धूम मच्याउँदा उनी ६ वर्षकी थिइन् । त्यो गीतमा नाच्ने केटीसँग लट्ठ भइन् । फर्फराएको कपाल, अनुहारको भावभंगी अनि शरीरको चालढाल । उनलाई हरखबत त्यही केटीको याद आउँथ्यो । आमालाई सोधिन्, ‘मामु ! त्यो नाच्ने को हो ?’ आमाको जवाफ हुने गथ्र्यो, ‘माधुरी दीक्षित ।’ उनले उतिखेरै भनिहालिन्, ‘म पनि माधुरीजस्तै बन्छु ।’ आमा त्यतिबेला मुस्कुराइन् मात्र । उमेर बढ्दै गयो । अन्य नातेदार घरमा आउँदा सोध्थे, ‘नानु ! ठूली भएपछि के बन्छ्यौ ?’ उनको उत्तर कहिल्यै फेरिएन, उही ‘माधुरी ।’ हठ पनि कस्तो भने माधुरीजस्तै नाच्न भरत नाट्यम् र क्लासिकल डान्स सिक्न थालिन् । १५ वर्ष नभइन्जेल सिकिइरहिन् । उनको सपनामा कहिल्यै बदलाव आएन । १६ वर्षको हुँदा मिस टिनको उपाधि जितिन् । अहिले ३१ वर्ष पुगिन् । र, फिल्म संख्या र कमाइका आधारमा नेपालकै नम्बर वान् नायिकामा दरिएकी छन्, तीन वर्षयता । ती फुच्ची अर
२० पुष २०७५, शुक्रबार ०५:५०२० पुष २०७५, शुक्रबार ०५:५०२० पुष २०७५, शुक्रबार ०५:५० by Yess KhabarNo Comments
श्रीमान , म जीउँदै छु… – रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ !
एच.बी ताम्राकार , जापान । चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले आफ्नो जिवनमा घटेका नितान्त निजी घटनाहरु आफै सार्वजनिक गरेका छन् । सामाजिक संञ्जालमा रविको समर्थनमा ठुलो जमाथ देखिएको छ । उनले आफै खुलेर सवैलाई यसरी जानकारि गराए । रवि लामिछानेले सामाजिक संञ्जालबाट सार्वजनिक गरेको बक्तव्य : श्रीमान, म जीउँदै छु… नचाहदा नचाहदैपनि आफ्नो ब्यक्तीगत कुरा गर्नु पर्यो। मलाई पाईलै पिच्छे लडाउन,देश बाटै निकाला गर्ने लगायतका प्रयास बिफल भएपछि अब मेरो निजि जिवनमा प्रवेश गर्ने प्रयास हुदै रहेछ। लामो समय सम्म बैचारिक लडाइ लड्दै अलग अलग बसेको र पछी कानुनी रुपमा नै अलग भएको मेरो बैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर ठुलै खोजी चालिरहेको थाहा पाएपछि बाध्य भएर आफ्नो नितान्त निजि जीवन बारे लेख्न बाध्य भएको छु। मेरी पुर्व पत्नीलाई प्रयोग गरि मेरो वास्तविक रुप अर्कै हो भन्ने प्रमाणीत गर्न दिन रात लाग्नु हुने साथीहरुलाई मैले पहिल
१८ पुष २०७५, बुधबार ०७:५३१८ पुष २०७५, बुधबार ०७:५३१८ पुष २०७५, बुधबार ०७:५३ by Yess KhabarNo Comments
कतिपय मानिसले जाडो र गर्मीमा एउटै प्रकृतिको शृंगार सामग्री प्रयोग गर्छन् तर यसो गर्दा छालामा प्रभावकारी प्रतिक्रिया नदेखिन सक्छ । जाडोमा छाला सुक्खा हुन्छ भने गर्मीमा चिल्लो । जाडोमा मोइस्चराइजरको प्रयोग बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले मौसमअनुसार मेकअप प्रोडक्ट प्रयोग गर्नुपर्छ । जाडो मौसमको प्रारम्भसँगै छाला रुखो एवं ड्राइ हुँदै जान्छ । यस्तो बेला छालालाई सुन्दर, चम्किलो र नरम राख्न त्यसको राम्रोसँग हेरचार गर्नुपर्छ । छालामा सुख्खापन देखिनासाथ दिनको २–३ पटक मोइस्चराइजर लगाउनुपर्छ । ड्राइ स्किनमा वाटर बेस क्रिम वा मोइस्चराइजर लगाउन सकिन्छ अन्यथा बडी लोसन वा ओलिभ ओयल पनि उपयुक्त हुन्छ । जाडोमा स्पा ट्रिटमेन्ट पनि एकदमै राम्रो विकल्प हो । स्पा लिँदा शरीरमा भएको सबै फोहोर हट्छ । यसले छालामा जम्मा भएको अतिरिक्त तेलसमेत बाहिर निकाल्छ । समय–समयमा छाला स्क्रब गराउनु उपयुक्त हुन्छ । स
१२ पुष २०७५, बिहीबार ०७:०७१२ पुष २०७५, बिहीबार ०७:०७१२ पुष २०७५, बिहीबार ०७:०७ by Yess KhabarNo Comments
विश्वभरका २६ देशबाट श्रृंखलाको खोजी
काठमाडौं । मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा अझै चर्चामा छिन् । मिस वर्ल्ड २०१८ कि दावेदार मानिएकी श्रृंखला टप १२ मा परेर बाहिरिएकी थिईन् । उनले दुई वटा मल्टिमिडिया र ब्युटी विथ पर्पस अवार्ड जितेर निकै चर्चामा थिईन् । वर्ष २०१८ मा श्रृंखलाले आफु मात्रै चम्किएनन् नेपालको नाम समेत विश्वभर फैलाइन् ।उनै श्रृंखलालाई विश्वका २६ वटा देशबाट सर्वाधिक खोजी गरिएको पाइएको छ । सबैभन्दा चर्चित सर्च ईन्जिन गुगलले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । श्रृंखलालाई २०१८ को जनवरी, अप्रिल, नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा सर्वाधिक खोजी गरिएको छ ।श्रृंखलालाई नेपालबाट सबैभन्दा बढी खोजी गरिएको देखिन्छ । छिटपुट खोजी गरिएको देशलाई भने गुगलले समावेश गर्दैन । गुगलमा श्रृंखलाको उमेरदेखि उचाईसम्म खोजी गरिएको छ ।मेरदेखि उचाईसम्म खोजी गरिएको छ ।
१२ पुष २०७५, बिहीबार ०६:२०१२ पुष २०७५, बिहीबार ०६:२०१२ पुष २०७५, बिहीबार ०६:२० by Yess KhabarNo Comments
फोटाका कारण इशालाई गाली
काठमाडाैं – फिल्म, अभिनयका कारणले भन्दा पनि इशा गुप्तालाई उनको बोल्ड लुक्स र सेक्सी अन्दाजका कारण चिन्ने गरिन्छ । इशालाई दर्शकले पर्दामा हेर्न नपाएको पनि वर्षौं भइसक्यो । तर, उनी समाजिक सञ्जालमा भने उत्तिकै सक्रिय देखिन्छिन् । इन्स्ट्राग्राममा आफ्ना तालतालका फोटा पोस्ट गर्ने गरेकी उनी अहिले ट्रोल बनेकी छिन् । इशाले हालै केही टपलेस फोटा पोस्ट गरेकी थिइन्, जुन फोटा अहिले भाइरल भइरहेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । इशाको ती तस्बिरप्रति कतिपय प्रयोगकर्ताले भद्दा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।केहीले त उनलाई फ्लप हिरोइन भनेरसमेत उडाएका छन् । केहीले ‘तिमीले फिल्म पाउन छाड्यौ, तिम्रो यति दुःखदायी दिन पनि आयो’समेत लेखेका छन् । एकजनाको कमेन्ट छ, ‘शरम मान । बच्चा पनि इन्स्ट्राग्राममा हुन्छन् । तिमी हलिउडमा छैनौ । अलिकति दिमाग लगाऊ ।’ यति मात्र होइन, अर्का एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘तिम्रो परिवारले यो सबै